MIBVUNZO - Gemic
Unoda Kudzosera Gem? gem.agency inoita kuti zvive Nyore.
Isu tinovavarira kugutsikana kwevatengi kupfuura zvimwe zvese. Kana mukati memazuva makumi matatu ekugamuchira dombo rako (s) ukave usina kugutsikana neodha yako, unogona kuidzosera kwatiri mune yekutanga & isina kugadzikana mamiriro. Matombo anogona kungodzoserwa panguva ino yekuongorora kwemazuva makumi matatu.
Ndokumbira utumire Email GEMIC ye Return Authorization NUmber (akamhanya) Uye Zvimwe Return Instructions.
NB: Orders vakadzokera kwatiri pasina vakamhanya zvichabviswa vakaramba ndokudzokera yatumira. Return kavha uye kutumirwa mari ndiwo mutoro yatumira. rokutengesa vose yokupedzisira pashure pemazuva 30 (vakadzoka zvinhu zvinofanira postmarked mukati 30 mazuva musi nomurayiro vari agamuchira).
Ndapota regai kuramba mabha- delivery, Unofanira kuda kudzima akarayira pashure rave vatumirwa, asi pamberi hwakaiswa. Kana hurongwa iri vakaramba, mutengi achatakura mutoro wakazara kukosha zvinhu kana vakarasika uye zvose brokerage mhosva uye mabasa vaparawo pamusoro wayo kudzoka.
Munyika dzakawanda, akazivisa zvinyorwa vangagara zvinoshanda tsika mari nemitero. Buyers vane basa chero tsika, mutero uye mabasa kupiwa. Returns akaita zvakafanira yokuendesa haigoni simba.
** Refunds All vakaitwa nomukombiyuta chete nzira semubhadharo akapiwa. Shipping, inishuwarenzi uye kadhi kubudiswa mari ndiwo non-refundable. Hapana restocking muripo. No kutsiva vakapa.
More Mibvunzo? Taura nesu
GEMIC inonetsekana nezve kuchengetedzeka uye chengetedzo yevatengi vedu. Isu tinoona kuti maitiro edu ekutengeserana akachengeteka zvakanyanya uye kuti ruzivo rwevatengi vedu rwakachengeteka.
All muripo uye kadhi ruzivo zvikabatwa uri wakachengeteka peji kubudikidza PayPal. Hatina kuwana kadhi rako rokubhengi kana ruzivo zvemari. PayPal chibatiso ruzivo
GEMIC Laboratory inoremekedza ruzivo rwevanhu pawebhusaiti yayo. Kero yako yeemail inogona kushandiswa kwechinguva kugadzira email kana odha.
Hatizofi kutengesa email address, Browsing maitiro, kana mamwe mashoko chero.
GEMIC inoshandisa browser makuki kusimudzira kushanya kwako uye kugonesa yedu yekutenga online online. Hapana ruzivo rwemunhu rwakachengetwa mumakuki. Cookies inofanirwa kupihwa mukana wekuwana ese maficha ewebsite yedu.
Kuti uwane mibvunzo tapota contact us.
Unogona kurayira gwaro paunenge wedzera chinhu kuti ngoro yenyu. Kuti vaite izvi, baya kubatana "Wedzera gem chitupa chechinhu ichi" pamusoro chinhu zvakadzama peji pamusoro Wedzera ngoro bhatani. Izvi zvichaita kuzarura chitupa zvamungaita.
zvinhu zvose zviri avimbiswa paGEMIC. Isu tinoona kuti iwe unogara uchiwana izvo iwe zvaunobhadhara.
Matombo ese paGEMIC anovimbiswa kuve sezvakataurwa. Yedu nyanzvi vashandi vanonyatsoongorora uye kuyera dombo rega rega.
Natural matombo anokosha
Ose mabwe anokosha kubva kuGEMIC idombo rechisikwa rakagadzirwa neNyika. Isu hatishande mukugadzira kana lab-yakagadzirwa "matombo".
Zvaunoona, Zvaunoverenga Get
Mumwe chiwanikwa mufananidzo ndiko chiwanikwa chaiyo muchazvigamuchira. Hatidi kushandisa vapfuwi nemifananidzo kana mapikicha akafanana neyezvibwe zvakasiyana.
pazvose pamusoro apa kunotsigirwa edu 100% mari-musana sechivimbiso. Isu nekumira anokosha edu, sezvo vatengi vedu kutitsigira.
Payment Options uye Policies
Checking-panze ndiyo vakachengeteka uye nyore pamwe GEMIC Laboratory.
Isu zvinopa zvinotevera kusanduka muripo nzira yokupedzisa murayiro wenyu;
Kubhadhara nokuda kadhi Via PayPal (hapana PayPal nhoroondo zvaida)
PayPal anogamuchira Visa, Visa Delta, Visa Erekitironi, Mastercard, EuroCard, Maestro uye American Express. PayPal chibatiso ruzivo.
Kubhadhara vako PayPal nhoroondo
Isu kunge rukasimbiswa PayPal nhengo.
Cherechedza: Kana usina nyaya, unogona kuzarura nyaya itsva nyore nekutevera on-screen mirayiridzo.
Kubhadhara nokuda Western Union chinja
Kana kubhadhara pedyo Western Union kuchinjwa, zvenyu zvinhu zvichange kungoitwa kwemazuva matatu. Tapota nyorerai paemail vakatipa rakasiyana nhamba mari kutengeserana (MTN #) nokuda chinja yenyu. Pakangotanga Mari vave nokugamuchira, ticharamba ironge hurongwa hwako.
Cherechedza: Transfer mari haafaniri deducted kubva akagamuchira uwandu.
Kubhadhara nokuda zvakananga pamahombekombe chinja
Kana kubhadhara nokuda zvakananga bhengi kushandisa kwako zvinhu zvichange kungoitwa kwemazuva matatu. Tapota nyorerai paemail isu kubhangi kutapurirana bhuku romutemo kamwe iwe chokugutsikana muripo. Pakangotanga Mari vave nokugamuchira, ticharamba ironge hurongwa hwako.
Paunenge wagadzirira kubuda:
Wongorora yako yekutengera ngoro uye sarudza yako yekutumira nzira. Tinopa nzira mbiri dzinotevera uye mitero; Fedex (Mazuva 3-4)
Yakajairwa Pasi Pose Pasi Pose Airmail (mazuva 10-21)
Dzvanya "enderera Checkout" uye nyora yako yekutumira kero.
Sarudza yako yekubhadhara nzira uye tinya "bhadhara izvozvi".
Pinda ruzivo rwako rwekubhadharisa, kana kupurinda iyo-skrini mirayiridzo yekuchinjisa mari.
Kamwe kana odha yako yaiswa zvinobudirira, unozogamuchira email yekusimbisa kubva kwatiri kukero yako yeemail.
Cherechedza: Ndokumbira uve nechokwadi chekuwedzera yako email kero kuitira kuti uve nechokwadi chekuti iwe unogona kugamuchira yedu yekutumira uye odha yekusimbisa maemail. Kana iwe ukasagashira chero email kubva kwatiri, ndapota ita chokwadi chekutarisa yako spam kana junk email folda.
Kiredhiti kadhi uye PayPal kubhadhara zvinozobhadhariswa mune chero mari. Kubhadhara kuburikidza neWestern Union kana nekuchinjisa kubhangi kunofanirwa kutumirwa mumadhora ekuUS.
Kana uchisarudza imwe mari isiri madhora ekuUS, mwero wekutsinhana wezuva razvino unoshandiswa kushandura mitengo yakaratidzwa.
PayPal uye yako yekugadzirisa bhengi (kiredhiti kadhi iri kuburitsa bhengi) vanoshandisa yavo yekuchinjana mareti kushandura iwo mairi mari, nekudaro, mhosva dziri mumari yako yaunosarudza dzichasiyana zvishoma nemitengo inoratidzwa mune iyo mari pane yedu webhusaiti.
GEMIC inongobhadharisa huwandu hwaratidzwa. Chero ipi mari yekuwedzera inongoitirwa chete nePayPal's, kiredhiti kadhi rako rinopa mabhengi kana marongero eWestern Union
Kana iwe uine matambudziko nekubhadhara kana uchida kukurukura dzimwe nzira dzekubhadhara, ndapota inzwa wakasununguka taura nesu.
Express kutakura kazhinji kutora mazuva 3-4 ekuendesa uye anogona kuteedzerwa online nhanho dzese dzenzira. Mapasuru ane inshuwarisi yakazara. Siginecha inodiwa pakuendesa. Kununurwa neMuvhuro kusvika Chishanu kune nyika zhinji. Kwete PO mabhokisi (kunze kweUAE, Saudi Arabia neKuwait), APO kana FPO kero dzinogona kushandiswa.
Cherechedza: Kana iwe uine 'siginecha pafaira', ndokumbira ufonere EMS kuti ubvise iyi mvumo. Mapakeji anounzwa asina siginecha, nekuda kwe 'siginecha pane faira' haigone kuvharwa neinishuwarenzi anotakura.
Matombo ese anoratidzwa se'anowanikwa 'arimo uye akagadzirira kutumirwa nekukurumidza. Mirairo inogadziriswa mukati mezuva rimwechete rekushanda Muvhuro - Chishanu (kusasanganisa mazororo)
Munyika dzakawanda kutumira zvakatumirwa nomazvo kunoitirwa mutero uye mutero. Tsamba yakanyoreswa inotora nguva yakareba, asi kazhinji inodzivirira mari yekuwedzera Isu tinofara kutumira seChipo, asi ndapota ziva kuti hatina kutonga pamusoro pekuwedzera kwemaitiro kunogona kuitika munyika yako.
Ese mapakeji kubva kuGEMIC anosanganisira invoice yakazara. Ndapota taura nesu asati pakugovera hurongwa wako kana uchida kuva customized inivhoyisi kana pasina inivhoyisi zvachose.
Colored Gemstone Zvakajeka Dzose
GEMIC inoshandisa inotevera kujekesa muyero kana ichikwenya matombo emabwe:
IF : Loupe yakachena - mukati isina chakakanganisika; isina ma inclusions.
putkiston osat : Almost loupe yakachena - chaizvo, zvishoma zvishoma inclusions; inclusions zvisingaoneki pasi pegumi kukura.
VS : Ziso rakachena - zvishoma zvishoma inclusions; zvishoma inclusions zvinogona kuonekwa neziso rakarovedzwa kana pasi pegumi kukura.
SI : Zvishoma zvinosanganisirwa - zvidiki zvishoma zvinoonekwa neziso rakashama.
I : Inosanganisirwa - inclusions inogona kuonekwa neziso rakashama.